Adobe Premier Pro: Yakanakisa Linux Alternatives | Linux Addicts
Adobe Premier Pro: Yakanakisa Linux Alternatives
Adobe Premier Pro ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nyanzvi software kune avo vari kutsvaga yakazara vhidhiyo editing suite. Nekudaro, haisi yakachipa software, uye haiwanikwe yeGNU / Linux natively, chete yeMacOS neWindows. Pane kudaro, izvo hazvireve kuti hapana emahara uye akavhurika sosi dzimwe nzira dzine simba rakanyanya.
Muchikamu chino iwe uchaziva zvimwe zve sarudzo dzakanakisa iwe unayo kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu chakafanana neAdobe Premier Pro, sezvatakaita neiyo dzimwe nzira dzeFinal Cut Pro of Apple.
1 Dzimwe nzira dzeAdobe Premier Pro
Dzimwe nzira dzeAdobe Premier Pro
ari nzira dzakanakisa dzeAdobe Premier Pro Yemahara, yakavhurika sosi, yemahara, uye yekuzvarwa inowanikwa kuLinux ndeiyi:
Blender Ndiyo imwe yeakanyanya hunyanzvi 3D kugadzira software uye inoshandiswa nemaartist, kunyangwe kugadzira mimwe mitambo yemavhidhiyo nemabhaisikopo. Iyo ine ine simba chaiyo-nguva 3D injini, akawanda ezvishandiso zvine simba, modhi, animation, kupa, kutumira mameseji, editing, scripting, post-kugadzira kugona, uye zvimwe zvakawanda.
Pitivi iri intuitive uye inochinjika vhidhiyo mupepeti. Inogona kunge iri sarudzo yakanaka kune vese vanotanga uye nyanzvi. Iyo yakavakirwa paraibhurari inozivikanwa yeGES (GStreaming Editing Services). Kunyangwe iyo yakachena uye yakapusa GUI, ine yakanaka repertoire yezviwanikwa yekushandisa.
OpenShot Iyi imwe vhidhiyo mupepeti ane mukurumbira zvakare iri nyore kushandisa, ine kukurumidza kudzidza curve, asi ine simba seAdobe Premier Pro. Inogona kutsigira nhamba huru yemifananidzo, vhidhiyo uye maodhiyo mafomati, zvichikubvumidza kuti ushande nazvo, kuwedzera mhedzisiro, kucheka, paste, zvichingodaro, ine nguva inoita kuti basa rese rive nyore.
KDEnlive, ndeimwe yakakurumbira multitrack vhidhiyo mupepeti munyika yeLinux. Iyo ndeye KDE purojekiti, uye inotsigira angangoita ese mavhidhiyo uye maodhiyo mafomati, pamwe nekuve nemhedzisiro, shanduko, kugadzirisa uye kuumba maturusi, nezvimwe. Yese ine yakachena kwazvo uye iri nyore kushandisa graphical interface, pamwe nekuve yakavakirwa pane ine simba ffmpeg.
Shotcut Iyo zvakare imwe nzira yeAdobe Premier Pro.Nekufanana neyakapfuura, inoshandisawo ffmpeg, ine tsigiro huru yemultimedia, uye akawanda maturusi ekugadzirisa mavhidhiyo. Kune rimwe divi, inomirawo pachena nekuda kwerutsigiro rwayo rwemahara, ese ane maGPU, semakadhi ekutora, nezvimwe.
Cinelerra ndeye yemahara uye yakavhurika sosi software yekugadzirisa vhidhiyo paGNU / Linux. Chimiro chayo chine zvese zvaunoda kuti ubate mafoto, vhidhiyo, ruzha, nezvimwe. Uyezve, inobvumira kutora kunze zvakananga kubva kuMPEG, Ogg Theora, AVI, MOV, nezvimwewo mafaira, kunyange mbishi (RAW).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Adobe Premier Pro: Yakanakisa Linux Alternatives
Ndatenda, ndakanganwa sarudzo iyoyo.
Kunyangwe ndisina kuishandisa kwenguva yakareba, Cinelerra inofanirwa kunge iri pane iyo rondedzero uye zvakanyanya neshanduko dzichangoburwa dziri kuitwa kwairi.
Zvakanaka kuteerera zvirongwa zvinowanzoitika mukutanga google kutsvaga, asi pandakaverenga iyi positi, ndaitarisira zvirongwa zvehunyanzvi kana zvemhando yepamusoro ...
Ini handizive, semuenzaniso Davinci Resolve ...
Opinión anonima de un usuario ?
Pindura kuna KiboHerthz
RHVoice, iyo yakavhurika yekutaura synthesis system inouya kune vhezheni 1.6.0
Bvisa Linux: iyo distro inovanza zvakanaka zvakavanzika